မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် တိုးမြှင့်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအား ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်ကိုယ်စားလှယ် သတိပေး - Xinhua News Agency
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် ကိုရီးယားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ခြင်းနှစ် ၉၀ ပြည့်အခမ်းအနား မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့ရှိ ကင်အီဆွန်းရင်ပြင်၌ ကျင်းပနေသည့် မြင်ကွင်းပုံရိပ်တစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (DPRK) အပေါ် တိုးမြှင့်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ အရေးယူရန် ကြိုးပမ်းချက်အား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက မေ ၁၁ ရက်တွင် သတိပေး ပြောကြားလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးသာ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံစုံဝါဒ နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုင်ရာ နိုင်ငံငယ်များ၏ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် Zhang Jun ( ရှေ့တန်း) အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြုံယမ်းမြို့ရှိ ကင်အီဆွန်းရင်ပြင်၌ ပြည်သူများစုဝေးရောက်ရှိနေသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ပြဿနာထဲတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှေ့မတိုးသာနောက်မဆုတ်သာ အခြေအနေကို ဖောက်ထွက်နိုင်သည့် သော့ကိုင်ထားသူဖြစ်သည်။ထို့အတွက်ကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ပတ်သက်၍ ကြောင်းကျိုးဆီလျှော်သော စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အပြုသဘောဆောင် တုံ့ပြန်ရန် ခိုင်မာသော အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုမူသင့်ကြောင်း နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စောလျဉ်းစွာဖြစ်ပေါ်လာရန် အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ် Zhang Jun က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်တော့မည့်အချိန်မျိုးတွင် အမေရိကန်ဘက်က ချွင်းချက်မရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ရန် တောင်းဆိုနေသဖြင့် ယင်းမှာ တင်းမာမှုများကို ဆက်လက်မြင့်တက်စေပြီး နှင့် ဖိအားတိုးစေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ထိုအရာက အပြုသဘောမဆောင်သည်မှာ အလွန်ထင်ရှားကြောင်း တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်က ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်ရဲ့ အခန်း ၇ ပါ အမေရိကန်နိုင်ငံက အဆိုပြုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းအသစ်ဟာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို သင့်တင့်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နောက်ထပ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့ကိုပဲ ဦးတည်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်များတွင် လုံခြုံရေးကောင်စီသည် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အမျိုးအမျိုးကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ခွင့်ပြုပေးနေချိန်တွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် နျူကလီးယားအရေးနှင့်ပတ်သပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသော ၊ နိုင်ငံရေး နှင့်သံတမန်ရေး ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ် အဖြေရှာရန်လည်း လိုအပ်နေရာ ယင်းကိစ္စရပ်အားလုံးမှာ တန်းတူညီမျှ အလေးထားသင့်ကြောင်း Zhang ကဆိုသည်။
“ ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ အဆုံးသတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုပေမယ့် နိုင်ငံရေး ပြေလည်မှုရမယ့် ရည်မှန်းချက်အားလုံးကို အမြဲတမ်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ် ၊ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမျှခြေတွေ ဒါမှမဟုတ် သံတမန်းနည်းလမ်းအားထုတ်မှုကို အစားထိုးဖို့ ကြိုးပမ်းချက်ဟာ လုံးလုံးလျားလျားနွားရှေ့ထွန်ကျူးတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ ၊ လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှု ရလဒ်ကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ” ဟု ဟု၎င်းက ဆိုသည်။ “ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွက် အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခု နဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကိုပါ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေလင့်ကစား အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေဟာ လုံးလုံးလျားလျား ငြင်းဆန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီ အသီးသီးနဲ့ ၁၇၁၈ (မြောက်ကိုရီးယားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ) ကော်မတီကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ရဲ့ ကောက်ချက်ချမှုတွေနဲ့ လည်း သိသာထင်ရှားစွာ ကွဲလွဲနေပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချို့သည် အားကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရန် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှုရှိသည့် အဆိုပြုချက်များကို ရှေ့ဆက်တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဘုံသဘောတူညီချက်အရ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးတွင် နိုင်ငံရေးအရအဖြေရှာရန် တွန်းအားပေးသွားမည်ဟုဆိုသည်။
ယင်းအဆိုပြုချက်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့ က ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်မကောင်းစွာပင် မြောက်ကိုရီးယားနျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးမူကို အသေဆုတ်ကိုင်ထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်သောအဆိုပြုချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုထားပြီး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေး မှော်စွမ်းအားနှင့်အတူ အယူသည်းစွာဖြင့် တရားသေဝါဒကို ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားကြောင်း Zhang ကဆိုသည်။
“ အကယ်၍ သူ့ရဲ့ အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ အမူအကျင့်ကို အမေရိကန် ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခု ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ် ၊ တရုတ်-ရုရှား ပူးတွဲ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အရေးတယူထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရေးသည် သမိုင်းကြောင်းကို သေသေချာချာရှုမြင်သင့်ပြီး အရင်းခံအကြောင်းတရားကို ဘက်စုံထောက်စုံနားလည်ရန် နှင့် ယင်းကိစ္စရပ်၏ အကျိုးဆက်များကို သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တင်းမာမှုအခြေအနေကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နျူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေး နှင့် တင်းမာမှုအခြေအနေလျှော့ချရေးကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် နှင့် အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တို့သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး မြောက်ကိုရီးယား-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး အသွင်သဏ္ဍာန်သစ်တစ်ခုကို ထူထောင်ရန် ၊ ကျွန်းဆွယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးယန္တရားတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် နှင့် နျူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေးအစီအစဉ်များ ရှေးတိုးဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစွာပင် အမေရိကန်ဘက်က ၎င်း၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် နောက်ပိုင်းတွင် သွေဖီခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ပြုမူဆောင်ရွက်သည့် အရေးယူမှုစည်းမျဉ်းဥပဒေသအရ မြောက်ကိုရီးယား၏ အပြုသဘောဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များအား အမေရိကန်ဘက်က အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ၊ မြောက်ကိုရီးယား-အမေရိကန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွင် ရှေ့မတိုးသာနောက်မဆုတ်သာအခြေအနေဆီသို့ ဦးတည်စေခဲ့ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန် မယုံကြည်မှု နှင့် နျူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေးအစီအစဉ်ကို လိပ်ခဲတည်းလဲဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း Zhang ကဆိုသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် အခြေအနေအပေါ် အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း နှင့် ကျွန်းဆွယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလီးယားကင်းစင်ရန် အစဉ်တစ်စိုက် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း နှင့် ပြဿနာများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေး နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် အားပေးကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေနဲ့ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့တည်ငြိမ်ရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြဖို့ ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုကို တိုက်ရိုက်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ ၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လမ်းခုလပ်မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ ၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အမြန်ဆုံးလုပ်ကြဖို့ နဲ့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ဥပဒေကြောင်းအရ စိုးရမ်းပူပန်နေတာတွေကို မျှမျှတတ ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ ထိရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကို ရှာဖွေကြဖို့ ကျွန်တာ်တို့ ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ” ဟု ဆိုသည်။
အချို့သော မကြာသေးခင်က အပြုသဘောမဆောင်သည့် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက အလွန်စိုးရမ်ပူပန်မိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။အချို့နိုင်ငံများက မြောက်ကိုရီးယားတွင် နျူကလီးယားကင်းစင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုနေချိန်မှာပဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် နျူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း ၊ ယင်းမှာ နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း တရုတ်သံအမတ်ကြီးက ဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ် အချို့နိုင်ငံများက ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ထုတ်ဖော်နေစဉ် အတွင်းမှာပင် တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆိုသလို ၎င်းတို့သည် ဟိုက်ပါစွန်းနစ်(အသံထက်မြန်သော ဒုံးကျည်များ) ကဲ့သို့ သော၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးစစ်လက်နက်စနစ်များကို တိုးတက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အချို့သော နိုင်ငံများမှ အချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများသည် လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှု အကြောင်းပြချက် ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်နျူကလီးယားမျှဝေသုံးစွဲရေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစည်းရုံးလုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေး ကနဦးဖော်ဆောင်မှုသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးဖြေရှင်းရာတွင် အလွန်အရေးပါသော လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးသည် ခွဲခြိမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရသလို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးသည် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ မလုံခြုံမှုအပေါ် အခြေတည်၍ မရပေ။ ယင်းယူဆချက်သည် အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေး ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအနေဖြင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန် တရုတ်နိုင်ငံက နောက်ထပ်တစ်ဖန်ထပ်မံ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးယန္တရားတစ်ခုတည်ဆောက်မှု မြှင့်တင်ရန် နှင့် ကျွန်းဆွယ်၌ နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး ဖော်ဆောင်ရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြင့် ယင်းကို အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း Zhang က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
UNIT Chinese envoy warns against more sanctions on DPRK
ED NATIONS, May 11 (Xinhua) — A Chinese envoy on Wednesday warned against attempts to impose more sanctions on the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).
Dialogue and consultation is the only correct way to resolve the Korean Peninsula issue. The United States isadirect party to the issue and holds the key to breaking the deadlock. As such, it should take concrete actions to respond positively to the reasonable concerns of the DPRK and create conditions for an early resumption of dialogue, said Zhang Jun, China’s permanent representative to the United Nations.
Although the U.S. side claims to be willing to engage in unconditional dialogue, when it comes to actions, it is continuing to tighten sanctions and exert pressure. This is clearly not constructive, he told the Security Council. “The new draft resolution proposed by the United States, evoking Chapter VII of the UN Charter, is centered on furthering sanctions, which is not an appropriate way to address the current situation on the peninsula.”
“Sanctions are butameans to an end, and should always serve the overall goal of political settlement. Equating sanctions to or replacing diplomatic efforts is completely putting the cart before the horse, and will not achieve the desired result,” he said. “Despite the fact that sanctions have already hadanegative humanitarian impact and collateral damage to other countries, the countries concerned are still in total denial, which is inconsistent with the conclusions of various international humanitarian agencies and the 1718 (DPRK Sanctions) Committee’s panel of experts.”
“We believe that if the United States changes its negative attitude, it is possible for council members to reachaconsensus. We hope that the council members will give serious consideration to the joint China-Russia draft resolution,” he said.
The issue of the Korean Peninsula should be looked at historically and comprehensively so as to understand the causes and consequences of the matter at hand. After 2018, there had beenageneral de-escalation of the situation. The DPRK tookaseries of measures to denuclearize and de-escalate the situation. The leaders of the DPRK and the United States met in Singapore and reached agreement on establishinganew type of DPRK-U.S. relations, buildingapeace mechanism on the peninsula, and advancing the denuclearization process. Regrettably, the U.S. side later reneged on its position, and did not reciprocate the DPRK’s positive initiatives in accordance with the action-for-action principle, leading to an intractable impasse in the DPRK-U.S. dialogue, adding to the mutual distrust between the two countries, and stalling the denuclearization process, said Zhang.
Asaclose neighbor, China is highly concerned about the situation on the Korean Peninsula, and has always insisted on maintaining peace and stability on the peninsula, denuclearizing the peninsula, and resolving problems through dialogue and consultation, he said. “We advocate that all parties concerned should prioritize the overall peace and stability on the peninsula, adhere to the direction of dialogue and consultation, meet each other halfway, resume meaningful dialogue at an early date, and explore effective ways to resolve each other’s legitimate concerns inabalanced manner.”
Some countries are calling for the denuclearization of the DPRK, while they themselves are promoting cooperation on nuclear submarines, which carries serious risks of nuclear proliferation.
Some countries profess their concerns about the DPRK’s military development, while at the same time developing with much fanfare their own offensive weapons system such as hypersonic weapons. A certain politician inacertain country concerned even went so far as to openly advocate discussing nuclear sharing under the pretext of addressing security threats, he noted.
China’s Global Security Initiative is an important guide to resolving the issue of the Korean Peninsula. Security is indivisible. The security of one country cannot be based on the insecurity of another country. Suchaconcept works anywhere, anytime, he said.
Photo(1) Photo provided by Korean Central News Agency (KCNA) on April 26, 2022 shows fireworks duringamilitary parade held at Kim Il Sung Square in central Pyongyang, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), on April 25, 2022, to mark the 90th founding anniversary of the Korean People’s Army (KPA). (KCNA via Xinhua)
Photo (2) Zhang Jun (front), China’s permanent representative to the United Nations, speaks atahigh-level roundtable on small states, multilateralism and international law at the UN headquarters in New York, on April 28, 2022. (Xinhua/Xie E)
Photo (3) Photo provided by Korean Central News Agency (KCNA) on April 16, 2022 shows the view ofalarge-scale civilian rally and parade at the Kim Il Sung Square in Pyongyang, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). (KCNA via Xinhua)
Related Topics:chinaNorth KoreaUNXinhuamyanmarတရုတ်မြောက်ကိုရီးယား